Ifulethi lesimanje elinamagumbi okulala ayi-1 e-The Ivy, East Legon
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Sander En Rita
I-Ivy iyisakhiwo esisha sha kanokusho esitholakala ngemuva kweLagos Avenue e-East Legon. Izinsiza zifaka indawo yokuzivocavoca esezingeni eliphezulu elibheke i-Legon, indawo yokubhukuda ene-Jacuzzi, izindawo zokupaka izimoto, onogada abangu-24/7. I-WiFi ayinamkhawulo futhi iyashesha futhi ilungele ukusetshenziswa ngochwepheshe. Ifulethi elinegumbi lokulala eli-1 lithulile, isimanjemanje, futhi lilula; ilungele umuntu oyedwa noma ababili. Umbhede osayizi wendlovukazi kanye nenye ifenisha konke kuyi-IKEA futhi kukhululekile kakhulu. Izindawo zokudlela eziphambili namabha kuseduze.
Sithenge umbhede othokomele kakhulu webhokisi we-IKEA kanye nosofa. Kunendawo yokudlela enezihlalo ezimbili. I-TV ine-Netflix futhi i-WiFi iyashesha futhi ayinamkhawulo: ilungele ukusetshenziswa kochwepheshe, i-inlcude MS Teams, Zoom, njll., njll.
Ikhishi liyikhwalithi yaseJalimane futhi linokupheka kukagesi, i-micro wave, i-blender, ihhavini, ifriji/ifriji nomshini wokuwasha.
Indlu yokugezela ineshawa elithandekayo elinamanzi ashisayo nomfutho ophakeme.
Izakhiwo zekhompompi zifaka indawo yokubhukuda ene-jacuzzi futhi ungenza izivivinyo zakho endaweni yokuzivocavoca esezingeni eliphezulu elibheke i-Legon. Indawo yokupaka egadiwe yamahhala esakhiweni.
I-East Legon iyindawo eseduze ezayo e-Accra. Igcwele izindawo zokudlela ezinhle (okuhlanganisa nokudla kwangempela kwase-Thai kwabathandi) namabha aphambili e-ANC Mall. I-'Chez Afrique' edumile isendaweni ehamba ngezinyawo ekhoneni futhi ilungele ukudla okuthile kwasendaweni, umculo obukhoma phakathi nempelasonto, futhi ungajoyina isixuku esidansa uma uthanda. Sekwanele ukuthi ungaphazamisi ubusuku bakho. I-Ivy isendaweni ethulile.
Ungakwazi futhi ukuhamba uye ku-Lagos Avenue, omunye wemigwaqo ephila kakhulu e-East Legon. Iba ne-tilapia nesiphuzo!
Isitolo esikhulu sakwa-SPAR, izindawo zokudlela kanye namabhange amaningana ane-ATM ayatholakala futhi ebangeni lokuhamba ngezinyawo eLagos Avenue.
Ibungazwe ngu-Sander En Rita
Uma kwenzeka kuvela noma iyiphi inkinga ungasishayela njalo (uRita & Sander) futhi siqinisekisa ukuthi sikusiza ngokushesha okukhulu. Ungakhuluma nathi ngesiNgisi, isiFulentshi noma isiDashi futhi uma ungakhulumi ngokushesha kakhulu uSander angazama futhi ukukusiza ngesiJalimane noma iSpanishi.
Uma kwenzeka kuvela noma iyiphi inkinga ungasishayela njalo (uRita & Sander) futhi siqinisekisa ukuthi sikusiza ngokushesha okukhulu. Ungakhuluma nathi ngesiNgisi, isiFulentshi nom…
USander En Rita Ungumbungazi ovelele